ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ စနစ်တကျ ပြုစုထိန်းသိမ်းရေးမှာကြား ‹ အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ စနစ်တကျ ပြုစုထိန်းသိမ်းရေးမှာကြား
နေပြည်တော်၊ မေ ၂၀ ။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင် အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်(၉)နာရီခွဲအချိန်တွင် အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ကြိုင်၊ ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။ သတင်းအပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် ….
နိုင်ငံခြားသား အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လမ်းညွန်စာအုပ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများရှိ အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးများ
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာနများ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ
မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ
လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း
ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီ၏ အထည်အလိပ်နှင့်အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းကော်မတီဆိုင်ရာဥပဒေပြုအမတ် Hon. Mr. Felix Chung ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Tatshi HIGUCHI အားလက်ခံတွေ့ဆုံ